Fampahafantarana Ireo Peace Corps Bilaogera Ao Maraoka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Janoary 2018 15:38 GMT
Ahitana vondrona bilaogera marobe amin'ny fiteny Anglisy ao Maraoka, mino aho fa mahita izany ianao. Raha marobe ireo teratany Maraokana mampiasa ny fahaizany teny Anglisy, ny sasany kosa dia mpampianatra na mpiasa mpila ravinahitra, misy ny vondrona iray hafa miavaka miharihary avy amin'ny teny filamatra izay takian'ny fikambanan'izy ireo tsy maintsy alefa ao amin'ny bilaogin'izy ireo: “Ny hafatra na sary rehetra alefa ao amin'ity bilaogy ity dia tsy maneho ny fomba fijery na ny hevitry ny Peace Corps Amerikana na rafitra hafa. “
Natsangan'ny Filoha John F. Kennedy tamin'ny taona 1961 ny Peace Corps, fikambanana ara-panjakana, manome fahafahana ho an'ireo Amerikana mpilatsaka an-tsitrapo mba hiasa roa taona amin'ny sehatra samihafa any amin'ny firenena 73 manerana izao tontolo izao. Manana programa momba ny tontolo iainana, fahasalamana, fampivoarana ny orinasa madinika, sy fampandrosoana ny tanora i Maraoka, izay manana mpilatsaka an-tsitrapo miisa 197 amin'izao fotoana izao,. Nandritra ny taona maro, nampiantrano mpilatsaka an-tsitrapo maherin'ny 3 500 ny firenena ary mbola manohy mitantana fandaharan'asa matanjaka.
Saingy mahafantatra ireo zatra ny Peace Corps fa, ny mpirotsaka an-tsitrapo (na ny PCVs, araka ny fiantson'izy ireo ny tenany), dia manao zavatra lavitra mihoatra noho ny asa amin'ireny sehatra ireny – mitovy amin'ny ambasadera ny asan'izy ireo rehefa mahafehy tsara ny fiteny eo an-toerana izy ireo, mandany fotoana miaraka amin'ireo fianakaviana eo an-toerana, ary manampy any amin'ny faritra hafa. Ity fampahafantarana ny sasany amin'ireo bilaogera malaza amin'ny Peace Corps ao Maraoka:
Mamarana ny asany amin'ny maha PCV i Cory Driver ao amin'ny 32n5w, izay efa voalaza tao amin'ny Global Voices teo aloha,. Ao amin'ny lahatsorany farany indrindra, nizara sary mahafinaritra avy amin'ny faritra Maraokanina izy. Ao Essaouira izany ary voalaza fa nanome aim-panahy ny “Castles on the Sand” an'i Jimi Hendrix ny sary vakivaki-trano:
Mpilatsaka an-tsitrapo iray hafa efa hamarana ny asany i Rachel Beach ao amin'ny Musings from Morocco . Vao haingana izy no nihanika ny Jebel Toubkal, tendrombohitra avo indrindra ao Maraoka izay mirefy 4.167,8 m (13,665 ft). Ity ny fanombohana tononkalo iray:
Tahaka ny hoe ampy ahy ny fiakarana ny Jbel Toubkal indray mandeha …
Toa nanadino ny fanaintainana sy ny fahoriana ny saina, ao anatin'ny fialohavana lehibe…
Mahafinaritra fotsiny ny ambin'ny tononkalo. Nizara andian-tsary ihany koa izy, ity iray avy ao amin'ny tendrombohitra:
Out of Control indray dia nosoratan'ny olona iray miantso ny tenany hoe “El Hombre Negrito,” izay nanoratra vao haingana momba ny traikefa Peace Corps:
Nandeha irery ny ankamaroan'ny traikefa momba ny Corps de Corps ka tena hafahafa rehefa tafaraka mandritra ny fotoana maharitra izahay. Indraindray mitovy ny fahavitrihan'ny fiarahamonina ary indraindray samihafa tanteraka. Na ahoana na ahoana, tao anatin'ny herinandro vitsy lasa izay, tsara vintana aho nahita ireo mpilatsaka an-tsitrapo hafa matetika ary mihevitra aho fa nanampy ahy hihazona ny fahasalamako izany.
27monthswithoutbaseball koa niresaka momba ny traikefa tamin'ny PCV, hoy izy:
Mitolona mikasika ny olana maha mpikambana (appartenance) sy ny fanekena ihany koa aho- olana hitan'ny mpanazatra momba ny asa fa zavatra manan-danja ho ahy amin'ny fitadiavako asa. Tsy mahatsapa aho hoe tsy ao amin'ny Peace Corps – mbola tsapako fa safidy tsara ho ahy amin'ny fiainako ankehitriny izany – ary tsy mahatsapa aho fa tsy ao Azrou; mahatsiaro ho noraisina tsara aho – saingy mbola miezaka manatsara ny fifandraisako amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo hafa aho. Zavatra tsy nandrasako ny hanana olana tahaka izany – zavatra izay tsy lazain'izy ireo amin'ny fampiofanana!
Shwiya b shwiya, izay midika hoe “tsikelikely” amin'ny teny darija (Arabo Maraokana), dia bilaogy iray tena tsara vakiana avy amin'ny PCV vaovao izay manome fanazavana lehibe hoe: tahaka ny ahoana ny fiainana ho an'ireo mpirotsaka an-tsitrapo ao Maraoka. Vao haingana, nanoratra ity bilaogera ity hoe:
Ao anatin ‘ny fotoana tahaka ireo ihany no mandona ahy. Ao amin'ny Peace Corps aho. Monina ao Maraoka aho. Lasa zatra izany aho ka tsy hafahafa ho ahy intsony izany. Toa mahazatra eto izany, na dia tsy fantatro aza ny fiteny ary monina amin'ny trano vita fotaka aho. Somary tsy dia hita izany. Indraindray aho manontany tena ny amin'ny zavatra ataoko eto amin'izao tontolo izao, saingy indrindra, tena adinoko ny misy ahy. Na tsy manadino aho; tsy mihevitra aho fa any Etazonia, mazava ho azy, fa tsy misy dikany fotsiny izany. Tsy fantatro ny tena maha zava-dehibe izany, saingy somary tena hafahafa rehefa indray mandeha isan-kerinandro, mandona ahy fa monina eto aho ary PCV aho. Tena fahatsapana hafahafa izany: indraindray toa mahatsapa tahotra kely, indraindray manome hafaliana ahy izany ary mihomehy aho.
Araka ny hitanao, vondrona samihafa ny PCV ao Maraoka ary tsara jerena. Hanohy hizara ny tantaran'izy ireo aminao miaraka amin'ireo hafa aho, ary hampahafantatra PCV bebe kokoa rehefa tafahoana amin'izy ireo.